Imbobo yomkhiqizo nokuhlobana yayo
Manje ukuzwa inkulumo ethi "nezimbobo kukhompyutha", awudingi ukuya okukhethekile ezitolo, noma umnikazi ubuchwepheshe computer. Phela, ngisho abafundi esikoleni samabanga aphansi zazi kule ndaba kahle.
Ngesikhathi amazwi "Imbobo" umuntu ngokuvamile emelelwa ebhentshini elingaphansi nge Cranes okusezingeni eliphezulu lapho imikhumbi emikhulu engena, imikhiqizo ekuletheni ukulayisha kwezimpahla. Ngo-computer ubunjiniyela okokufaka okukhipha port ingenye izinhlobonhlobo nehad yakhelwe ukuxhuma amadivayisi angaphakathi kanye neuropathy idatha umbadlana ibhasi. Njengoba ukubukeka amakhompyutha kuqala Kuye kwahlongozwa inqwaba izimbobo ezahlukene leyehlukile kwetfula ngokomzimba futhi umthetho olandelwayo osetshenziswa. Abanye baye basinda futhi asetshenziswa ngisho nanamuhla. Ngokwesibonelo, i-port ye-serial, abakhiqizi abaningi umbadlana zabuye unsoldering ngemikhiqizo yabo.
Kuyini kuphawuleka kakhulu? Okungavumelanisiwe port serial (ngezinye izikhathi ebizwa ngokuthi COM, kusukela English. Igama «nokuxhumana») uvele owokuqala IBM-ehambisanayo onobuhle ikhompyutha. Isetshenziselwa ukuxhuma amagundane, imodemu namanye amadivayisi neuropathy, nenhlangano (kuyadingeka null-imodemu ikhebula), elula lwenethiwekhi phakathi ama-computers amabili. Omunye izinzuzo possessed port yomkhiqizo e lula hardware ne-software ukuqaliswa.
Emzimbeni, it is emelelwa 9 noma 25-pin isixhumi. ukudluliswa kwedatha senzeka kulo bit by bit, zilandelana (ngenhlanhla yesibili kungakho igama). Protocol akuyona ngokweyame kunoma yimiphi imikhawulo isikhathi isikhawu phakathi zonke izingcezu 16 (2 amabhayithi). Siyabonga kulesi sici, ichweba serial ngezinye izikhathi ibizwa ngokuthi indlela yokudlulisa.
Kufanele kuqashelwe ukuthi ulwazi bit namanje ukusebenza kwezikole zokusoka. Ngakho, izinga hardware ukusetjenziswa kwaso, bavunyelwe izinga 115.200 ibhithi yesibili (bps) ngamunye, nakuba izinhlelo ngokuvamile Windows ezisebenza it is eyayenziwe kungagcini 9600 (umsebenzisi angakwazi yenze izinguquko ukuze ihlangabezane umphathi kudivayisi). Ngokungafani nezinye interface serial (USB, FireWire) izingcezu ziqoqwa ku amaphakethe, futhi idluliselwa izingxenye.
A interface ezivamile-USB seyenziwe ngenhloso nokuxoshwa kusuka emakethe yokuguga COM port (RS-232C). Lesi sinyathelo sasingagwemeki, kusukela ijubane ukudluliswa kwedatha ku izinhlobo ezikhiqiza kakhulu kwaba Translations into Zulu 921.600 kuphela, lokho kwakunganele (kuqhathaniswa USB ne 480 Mb / s). I ethile yesibili - akunakwenzeka "hot" uxhumano: ngomzamo ukuxhuma idivayisi echwebeni yomkhiqizo uma computer egijima kwaholela kakhulu wangakwazi ukusebenza ngenxa yokuntuleka Plug & Play ubuchwepheshe, kanti okubi - ukuze ukwehluleka kokubili idivayisi iphinde isilawuli COM itheku elisogwini umbadlana (ukunwetshwa ikhadi).
Ngenxa yalokhu, eminyakeni embalwa edlule, wonke amakhadi esikhishwe awunawo port COM, njengoba sekuke kwenteka nge-PS / 2 futhi AGP. Nokho, inani elikhulu okuphathelene nomngcele ekhona eyenzelwe ukusebenza port serial, ophoqelelwe abakhiqizi sokubuyisa COM ngisho LPT (parallel). Akungabazeki ukuthi abasebenzisi abaningi baye wabatshela "siyabonga". Ngemva agqoke i- umsakazo odlala ama-satellite manje asikho isidingo ukubheka kwikhompuyutha ubudala noma uthenge adapters ungakhululekile, inverters. Ngaphezu kwalokho, i program kakhulu nazo ngokusebenzisa imbobo ye-serial, njengoba ubhala izinhlelo ukulawula akakubangeli nzima kakhulu ngaye.
Kuyathakazelisa ukuthi eziningi zanamuhla okuphathelene nomngcele ukuze isebenze kahle ohlelweni lokusebenza emulates a imbobo COM. Lokhu mobile phones, imisakazo, adaptha ye-Bluetooth , kanye nabanye. Yiqiniso, izici port virtual lingaphezulu kakhulu ukwedlula ukuqaliswa ejwayelekile.
Indlela ukususa nomsindo headphones kukhompyutha yakho? Ama-headphone Wireless nge-microphone yekhompyutha
Kungakanani Iprotheni, noma yini engase ibe yingozi banana Ukudla